प्रचण्डको खतरनाक मास्टरप्लानः बामदेव र रामवीरलाई ‘ललिपप’, ओलीको ‘सफाया’, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
दामोदर नेपाल , २५ आश्विन २०७५
प्रचण्डले रामवीर र बामदेवलाई ललिपप देखाइरहेका छन् । उनीहरु पनि प्रचण्डको आश्वासनमा मख्ख परेर उनले भनेझैं गर्दैछन् । उता प्रचण्ड भने यी दुईलाई गोटी बनाउँदै शक्ति हत्याउने दाउमा छन् ।
बामदेव सांसद बन्न लालायित छन् । तत्कालीन एमालेका सिनियर नेता बामदेव भावी प्रधानमन्त्रीका समेत दावेदार थिए । तर, बाम गठबन्धनको देशैभरी प्रचण्ड बहुमत आउँदा बामदेव चिप्लिए । बाम गठबन्धनका न्यून प्रभाव भएका र आलाकाँचा उम्मेदवारले समेत चुनाव जित्दा प्रभावशाली र सिनियर बामदेवले नै चुनाव हारे । यो चोट उनलाई असह्य भएको छ । उनी लामो समयदेखि नै उपनिर्वाचनबाट भए पनि सांसद बन्न चाहन्छन् । यसका लागि उनले झलनाथ खनाल वा माधव नेपालमध्ये एकलाई राष्ट्रपनि बनाएर त्यो ठाउँबाट उपनिर्वाचनमार्फत सांसद बन्ने प्रयास पनि नगरेका होइनन् । तर ती सबै प्रयास सफल नभएपछि उनी प्रचण्डसँग नजिकिएर रामवीरलाई राजीनामा गराउने र सांसद बन्ने आशामा छन् ।
सार्वजनिक रुपमै रामवीरले भन्न थाले ‘ओलीको काम छैन, ओलीबाट केही हुँदैन ।’ रामवीरले पत्रकार सम्मेलनका बेला चुरो कुरो फुत्काइहाले ‘ओलीलाई हटाएर बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ ।’
केन्द्रीय सदस्य नै नपाएपनि रामवीरको अध्यक्ष ओलीप्रतिको आक्रोश चुलियो । यद्यपि यति बेलासम्म उनलाई आशा थियो – अध्यक्षले संसदीय समितिको सभापति भए पनि बनाउलान् । तर, यो आशा पनि निराशामा बदलियो, रामवीरले संसदीय समितिको सभापति पनि पाएनन् । त्यसपछि भने रामवीर प्रधानमन्त्रीको खुला आलोचक बने । सार्वजनिक रुपमै रामवीरले भन्न थाले ‘ओलीको काम छैन, ओलीबाट केही हुँदैन ।’ यो आलोचना पार्टीका एक सदस्यको नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिको रुपमा लिन सकिन्थ्यो । तर, रामवीरले पत्रकार सम्मेलनका बेला चुरो कुरो फुत्काइहाले ‘ओलीलाई हटाएर बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ ।’
प्रचण्डले आफूलाई केन्द्रीय सदस्य, मन्त्री र राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने आश्वासन दिएको रामवीर आफैंले भनेपछि पार्टीभित्र खैलाबैला मच्चियो ।
रामवीरको अध्यक्ष ओलीप्रतिको असन्तुष्टि र बामदेवको सांसद बन्ने लालसाका बीचमा प्रचण्डले आफ्नो शक्तिमा पुग्ने सपना सार्थक हुने बाटो भेट्टाए । त्यसपछि प्रचण्डले यी दुईलाई गोटीका रुपमा प्रयोग गर्न थाले । प्रचण्डले आफूलाई केन्द्रीय सदस्य, मन्त्री र राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने आश्वासन दिएको रामवीर आफैंले भनेपछि पार्टीभित्र खैलाबैला मच्चियो । ओलीबाट आशा गरेका कुरा प्रचण्डले दिने आश्वासन दिएपछि रामवीर प्रचण्डको इशारामा राजीनामा दिन तयार भए । उता बामदेव पनि प्रचण्डको पहलमा आफू सांसद बन्ने बाटो खुलेपछि प्रचण्डसँग नजिकिन तयार भए । हुन त बामदेव पहिल्यैदेखि प्रचण्डलाई साथ दिने व्यक्ति हुन् । प्रचण्डको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा भएको कटवाल काण्डमा पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदा समेत बामदेवले अन्तिम समयसम्म प्रचण्डलाई समर्थन गरेका थिए ।
पार्टीभित्र असन्तुष्टिको माहोल तयार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ट्रयापमा नपार्दासम्म उनले न प्रधानमन्त्री पद छोड्छन् न पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष । यही कारण ओलीलाई चेपुवामा पारेर प्रधानमन्त्री पद छोड्न बाध्य पार्ने प्रचण्डको दाउ छ ।
अहिलेको स्थिति हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद त कुनै पनि हालतमा छोड्दैनन् । यो कुरा प्रचण्डलाई पनि थाहा छ । तर, पार्टीभित्र प्रचण्डबाहेक अर्को विकल्प (तत्कालीन एमाले भित्रबाट) पाए ओलीले केही सहज रुपमा पद छोड्न सक्छन् । यो कुरा बुझेका प्रचण्डले बामदेवलाई दोस्रो विकल्पको रुपमा तयार पार्दैछन् । ओलीलाई चेपुवामा पारेर पद छाड्न बाध्य पारेपछि बामदेवलाई विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रचण्डको तयारी छ । बामदेवको उमेर पनि ढल्किसकेको र एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा भएकोले त्यत्ति इच्छा पूरा गरिदिन ओलीलाई आग्रह गरेर बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्डको दाउ हो । यसरी बामदेव प्रधानमन्त्री भए भने बामदेव पदमा त रहनेछन् तर हालिमुहाली प्रचण्डकै हुनेछ । प्रधानमन्त्रीबाट आफू अनुकूलका सबै निर्णय गराउन प्रचण्ड सक्षम हुनेछन् । आखिर बामदेव प्रचण्डका गोटी न हुन् ।